အေးသိုလှောင် Rapid တံခါး China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:အေးသိုလှောင်မြန်တံခါး,မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းသိုလှောင်တံခါး,အလိုအလျောက်အေးသိုလှောင် Rapid တံခါး
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > အေးသိုလှောင်ခန်းအမြန်တံခါး > အေးသိုလှောင် Rapid တံခါး
အေးသိုလှောင် Rapid တံခါး
ထွက်နိုင်ရေး: 8000 sets/year
လက်မှတ်: ISO9001 SGS
ဆိပ်ကမ်း: Shenzhen, China
2.Anti- Collision ဖွဲ့စည်းပုံ
ကုလားကာလွဲချော်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်လက်စွဲစာအုပ်ပြုပြင်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုယူနစ်မှပြန်လည်စတင်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးမတော်တဆဖြစ်ပျက်အခါတက်နေစဉ်အတွင်း reset နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါပျော့ကုလားကာ Anti-တိုက်မှုအစာရှောင်ခြင်းတံခါး, တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေးမှအကျိုးရှိသောအရာရိုးရှင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းရှိပါတယ်ဝတ်ထားအစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်နှင့်အစားထိုး၏ကြိမ်နှုန်းလျော့နည်းစေ, ထိထိရောက်ရောက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏သက်တမ်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်နှင့်ကုလားကာထိုအဖြစ်အပျက်အတွက်လွဲချော်ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ် ကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပြုပြင်နှင့် reset တစ်ခုမတော်တဆထိခိုက်မှုများ, နှင့်တက်အလိုအလျောက်ပြန်ညှိမှုကာလအတွင်းမလိုအပ်။
အပူ devices တွေကိုကော်လံနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။
ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းကိုတစ်နှစ်လျှင် 150000 ကြိမ်မှဒုက္ခ-အခမဲ့ခွဲစိတ်တက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမြင့်ဆုံးအလေ့အထများနှင့်နိမ့်ဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်။
ဘုံအမိန့်အဘို့လောက်7ရက်အတွင်းသာ။
ကျနော်တို့ပေါ်လာအားလုံးတံခါးနှင့် accessories.When ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး 12 လအတွင်းအာမခံပေး။
4. သင် OEM ဝန်ဆောင်မှုပေးသလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ OEM & လိမ္မော်ရောင် Service ကိုငါတို့အဘို့အ ok ဖြစ်ပါတယ်။
5. MOQ ကဘာလဲ?
ကျနော်တို့နမူနာအမိန့်အဖြစ် 1 set ကိုလက်ခံပါ။
ရေခဲသေတ္တာ Applications ကိုများအတွက်စက်မှုတံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုအလိုအလျောက် PVC ရေခဲသေတ္တာဇစ်တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အေးသိုလှောင်မြန်တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းသိုလှောင်တံခါး အလိုအလျောက်အေးသိုလှောင် Rapid တံခါး အေးသိုလှောင်မြန် PVC တံခါး အေးသိုလှောင်ဇစ်တံခါး အေးသိုလှောင်မြန်ဇစ်တံခါး အေးသိုလှောင်တံခါး အလိုအလျောက်မြန်တံခါး